Waa maxay sababta afar sano loo sugo Koobka Adduunka, goormee ayeyse soo bilaabatay in mudadaas badan la sugo? – Gool FM
(World) 06 Okt 2019. Waxaa jira saababo badan oo koobka adduunka u noqday mid la sugo afar sano, waxaaana jirta su’aal inta badan la iska weydiiyo sababta ka dambeysa in la sugo dhacdada ugu weyn Adduunka muddo afar sano ah.
Dhacdada ugu xiisa badan kubadda cagta caalamka ee Koobka Adduunka ayaa la sugaa waqti dheer oo afar sano ah, waxaana markaasi la isug keenaa waddamada adduunka inta nasiibku uu u dhoolla-cadeeyo ee isreeb-reebka ka soo muuqda, kana soo gudba si ay tartanka weyn u ciyaaraan.
Muwaadiniinta Waddamada caalamka ayaa la socda dhacdada iyo waxyaabaha ka qabsoomaya, haddaba waxa aynu idinla wadaageynaa sirta ku duugan in la sugo afar sano koobka adduunka.
Warbixinta oo aad u xiiso badan waxaa inoo diyaariyay Shaafici Maxamuud Nuur Shaafinho.